Ingqovungqovu yeveni efanele umndeni wonke | Isolezwe
Ingqovungqovu yeveni efanele umndeni wonke
Isolezwe / 16 August 2012, 2:15pm /
IMOTO: Mazda BT-50
AKUYONA nje kuphela ingqovungovu yeveni lokusebenza emapulazini, kodwa iMazda BT-50 pickup ihlanganise izinto eziningi ngoba ithi iyimoto yokusebenza iphinde ikwazi ukusetshenziswa imindeni uma ihlangene izikhipha.
Uma uyibheka uyabona ukuthi kuhlanganiswe isitayela sobuntofontofo, amandla okumelana nemisebenzi adingeka emotweni enkulu eyiveni. Ihlukene ngezinhlobo ezintathu kukhona iDouble Cab, Single Cab, kanye nebizwa nge Freestyle Cab lena eyakhelwe imindeni kanti futhi ongayisebenzisa ezintweni zamabhizinisi. Okuhle ngazo zonke izinhlobo ukuthi kulokhu kwaMazda bazivulile ngaphakathi ukuze abantu abangaphakathi bakhululeke.
Amandla ale BT-50 abonakala kahle uma idonsa umthwalo njengoba kuyona ukudonsa isikebhe sasolwandle kuyinto engelutho.
Ukungena nokuphuma kule moto kwenziwe kwaba lula uma uqhathanisa neyangaphambili engena esikhaleni sayo. Lokhu kudalwa uhlobo olusha lwezicabha esezivuleka ugabagaba. Lezi zicabha zibonakala kahle kwi Freestyle Cab okuthi noma sezivulekile kuphinde kube nesikhala esikhulu ongabeka kuso izimpahla ngemuva kwezihlalo zangaphambili.
Empeleni kuzona zonke izinhlobo abagibeli bahlala bakhululeke kusukela phansi ezinyaweni, izindawo zokubeka izingalo kanye nezokuncika.
Zonke izinhlobo ze Freestyle Cab (ngaphandle kwalena enenjini engu 2.2 MZ-CD SLX High Ride 4x2 5 MT Diesel) akanye neDouble Cab ziphuma ne-radio edlala i-MP3. I-BT-50 iphuma ne airconditioner eyi dual zone okusho ukuthi ungakwazi ukuyisebenzisa iqondane nawe ngqo ngaphandle kokuphazamisa abanye abagibeli.
Njengoba kuyiveni eyakelwe ukwennza imisebenzi nokungcebeleka nomndeni kwa Mazda bakuqikelele ukuthi baqinisa kakhulu kwezokuphepha. Bheka nje ngoba iphuma ne Emergency Brake Assist (EBA) esiza ukuthi imoto ibambe ngqi ezimweni ezinzima lapho umshayeli ebona khona ingozi. Akugcini lapho kodwa iphinde ibe ne Load Adaptive Control (LAC) ekwazi ukukala isisindo somthwalo ngemuva emotweni ukuze ikwazi ukusebenzisa amandla okudonsa ngawo wonke amasondo. Iphinde iphume nobunye ubuchwepheshe kwezokuphepha obubizwa nge Trailer Sway Assist (TSA) obusiza kakhulu ukubona uma umthwalo odonswa imoto ugcwala umgwaqo ngenxa yesisindo. Lobu buchwepheshe buhambisana ne Roll Stability Control esiza ekutheni imoto ingaphenduki uma.
Ezinye izinhlobo kule BT-50 zifakelwe ubuchwepheshe obulekelela umshayeli akwazi ukubona izinto ezingamphazamisa kanti akulula nokushayisa abantu abahamba ngezinyawo ngoba iphuma nePedestrian protection eyakhelwe ebhuthini okuthi noma umuntu kwenzeka umshayise kodwa angalimali ngendlela abengalimala ngayo uma eshayiswa yimoto efana neyakho.